Ubuntu MATE १..१० स्थापना गर्दै, स्थापना गाईड र पहिलो चरणहरू Ubunlog
उबुन्टु MATE १..१० स्थापना गर्दै, स्थापना निर्देशिका र पहिलो चरणहरू
लुइस गोमेज | | अन्य डेस्क, ट्यूटोरियलहरू
को पछिल्लो संस्करण उब्न्टु १..१० यसको मेट स्वादमा, नयाँ समय अनुकूलन गर्न चाहने Gnome को लागी उदासीनताहरुका लागि उत्तम डेस्कटप। "विली वे्रुल्फ" को कोड नामको साथ (स्पेनी भाषामा वेयरवल्फ बराबर केहि चीज) र डेबियन .9.0 .० "स्ट्रेच" डिस्ट्रोमा आधारित, यसले बीच प्रस्तुत गर्दछ यसको मुख्य उपन्यासहरू यसले यसको संस्करणलाई असर गर्दछ, निम्न:
सफ्टवेयर केन्द्र समाप्त भयो जसले प्रयोगकर्ता समुदायबाट आलोचना को एक बिट कारण भयो। यसको सट्टामा उबन्टु म्याट वेलकम भन्ने नयाँ उपकरण समावेश गरिएको छ, जुन परिवर्तनलाई राम्रो निर्णयको रूपमा लिन्छ।
डेस्क MATE १.१० पूर्वनिर्धारित द्वारा एकीकृत गरिएको छ मा अद्यावधिक प्रबन्धक -d y do-रिलीज-अपग्रेड गर्नुहोस्, त्यसैले उबुन्टु १.15.04.०ATE MATE बाट उबन्टु १..१० MATE मा अपग्रेड गर्न सम्भव छ।
A तेस्रो-पार्टी ड्राइभरहरू चयन गर्न नयाँ उपकरण जुन तपाईं टोलीमा प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ।
प्रत्येक संस्करणमा जस्तै, डिस्कोसको परम्परागत प्याकेज बनाउने विभिन्न कार्यक्रमहरू अद्यावधिक गरिएको छ र केही सानो बगहरू स्थिर गरिएको छ जसले प्रणालीको स्थिरता र प्रस्ताव सुधार गर्दछ। रास्पबेरी पाई २ का साथ अनुकूलता बढाइयो.
1 उबुन्टु १..१० मेट प्रणाली स्थापना
2 पहिलो कन्फिगरेसन चरणहरू
2.1 प्रणाली अपग्रेड गर्नुहोस्
2.2 जाभा स्थापना गर्नुहोस्
2.3 VLC मिडिया प्लेयर स्थापना गर्नुहोस्
उबुन्टु १..१० मेट प्रणाली स्थापना
प्रत्येक उपलब्ध लिनक्स वितरण को रूपमा, हामी प्रणाली छवि प्राप्त गरेर शुरू गर्नेछौं जुनबाट कम्प्युटरमा स्थापना गर्न र छविलाई डिस्कमा जलाउन वा भर्चुअल मेसिन सिर्जना गर्न आईएसओ फाईल प्रयोग गर्नुहोस्। डिस्क वा छविबाट कम्प्युटर सुरू गरेर हामी प्रणाली स्थापना मेनू पहुँच गर्नेछौं जसले अघिल्लो संस्करणहरूको सरलीकृत र न्यूनतम परम्परालाई पछ्याउँदछ।
हामी हाम्रो भाषा चयन गर्नेछौं र हामी वातावरणको उपलब्ध विकल्प मध्ये एउटा छनौट गर्नेछौं: प्रणालीको परीक्षण गर्नुहोस् कि यसले हाम्रा आवश्यकताहरू र स्वादहरू मिल्छ कि भनेर हेर्नको लागि वा हाम्रो कम्प्युटरमा सिधा स्थापना गर्नुहोस्।
त्यसो भए साझा प्रमाणिकरण गरिन्छ स्थापना प्रोग्रामको, जस्तै हाम्रो कम्प्युटर भण्डारण इकाईहरू र नेटवर्क जडानमा उपलब्ध खाली ठाउँ। त्यहाँ बक्समा चिह्नित गरेर, स्थापनाको समयमा देखा परेका नयाँ प्रणाली अपडेटहरू डाउनलोड गर्ने सम्भावना छ यो विकल्पले सम्पूर्ण स्थापना प्रक्रिया ढिलो गर्नेछ। त्यस्तै, तेस्रो-पार्टी सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने विकल्प पनि छ यदि हामीसँग ड्राइभरहरूको सर्तमा विशेष आवश्यकताहरू छन् भने प्लगइन। हामी जारी क्लिक गर्नेछौं।
अर्को खण्डमा हामीलाई हाम्रो एकाईको विभाजन गर्न विभिन्न विकल्पहरू प्रस्ताव गरिएको छ। हामी सफा स्थापना गर्न जाँदैछौं र हामी डिस्कको विभाजन जस्ता उन्नत विषयमा जान चाहँदैनौं, हामी पहिलो विकल्प छनौट गर्नेछौं जुन पूर्वनिर्धारित रूपमा देखा पर्नेछ र हामी स्थापनासँगै जारी राख्नेछौं। के थाहा छ यो प्रक्रिया डाटाको लागि विनाशकारी हो र उल्टाउन मिल्दैन, त्यसैले यदि तपाईंलाई अधिक जानकारी चाहिएमा तपाईं यसलाई भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ विशिष्ट मार्गनिर्देशन.
त्यसो भए हामी गर्न सक्दछौं नक्शामा हाम्रो स्थान छनौट गर्नुहोस्। यो विकल्प प्रणाली समय क्षेत्र समायोजित गर्न को लागी हो। पूर्वनिर्धारित रूपमा यसले हाम्रो क्षेत्र पत्ता लगायो त्यसैले हामीले मात्र क्लिक गर्नुपर्नेछ जारी राख्नुहोस्.
यस चरणमा प्रणालीले हामीलाई सोध्छ हाम्रो कुञ्जीपाटी सजावट हाम्रो भाषा को माध्यम बाट। हामी एक पूर्वनिर्धारित द्वारा आउने छनौट गर्नेछौं वा हामी हाम्रो रुचि अनुसार यो परिवर्तन गर्नेछौं। अर्को हामी जारी बटन थिच्नेछौं।
यस चरणमा हामी मुख्य प्रयोगकर्ता कन्फिगर गर्नेछौं टोली को। हामी आवश्यक डाटा भर्नेछौं र स्थापना प्रक्रिया जारी राख्नेछौं।
एक पटक यो चरण पूरा भएपछि, प्रणालीको स्थापना सुरू हुन्छ, जुन यसले लिने समयको लागि, स्क्रिनबाट केही मिनेट टाढा सर्न अनुमति दिनेछ। जब समाप्त हुन्छ, हामी परीक्षण जारी गर्न विकल्प प्रदान गर्नेछौं Distro वा तपाईंको कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्नुहोस् प्रणाली प्रयोग गर्न सुरू गर्नका लागि। हामी यो दोस्रो विकल्प छनौट गर्नेछौं र कम्प्युटर पुनःस्टार्टिंग समाप्त हुनका लागि कुर्नेछौं। जब कम्प्युटर अन्तमा सुरू हुन्छ हामी हाम्रो डेस्कटप प्रयोग गर्नका लागि तयार देख्नेछौं.
पहिलो कन्फिगरेसन चरणहरू
प्रणाली स्थापना गरिसकेपछि, यो कार्यहरूको श्रृंखलाहरू सम्पन्न गर्न सुविधाजनक हुन्छ जुन अन्तमा हाम्रो टोलीले काम गर्न सुरू गरिरहेको छ। हामी के तल विस्तार गर्दछौं सामान्य आदेशहरू जुन तपाईंले स्थापना समाप्त गरे पछि लागू गर्नुपर्नेछ तपाइँको उबन्टु MATE 15.10 को।
प्रणाली अपग्रेड गर्नुहोस्
जाभा स्थापना गर्नुहोस्
VLC मिडिया प्लेयर स्थापना गर्नुहोस्
अन्तमा, हामी प्रणाली सेटि accessहरू पहुँच गर्नेछौं र ट्याबमा जान्छौं सुरक्षा र गोपनीयता। यहाँबाट हामी कन्फिगर गर्न सक्छौं el हाम्रो मनपर्ने प्रणाली। पछि सफ्टवेयर र अपडेटहरू, हामी ट्याब छनौट गर्नेछौं थप ड्राइभरहरू र हामी ती छनौट गर्न सक्छौं चालक जुन हामी हाम्रो प्रणाली प्रयोग गर्न चाहन्छौं। यसको साथ हामीले हाम्रो प्रणाली स्थापना र कन्फिगरेशन समाप्त गर्यौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » डेस्क » अन्य डेस्क » उबुन्टु MATE १..१० स्थापना गर्दै, स्थापना निर्देशिका र पहिलो चरणहरू
एरिक रुबियो भन्यो
उबुन्टु मेट एक चमत्कार हो, म यस संस्करण १ 15.10.१० को कपर्टिनो प्यानल लेआउट र हेल्भेटिकालाई डिफल्ट फन्टको रूपमा प्रयोग गर्दैछु।
एरिक रुबियोलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, मलाई समस्या छ मँ एमपी3मा कुनै पनि फाइल पुन: उत्पादन गर्न सक्दिन। हो, मैले पहिले नै प्रतिबन्धित प्याकेज स्थापना गरें तर यसले अझै mp3 मा केहि पनि खेल्दैन। म के गर्न सक्छु?
उमर मान्रिक्वेज भन्यो
मैले जाभा स्थापना गर्न कोशिस गरें, तर प्याकेज भेटिएन। यसलाई स्थापना गर्न म के गर्न सक्छु?
मसँग उबन्टु मेट १ 15.10.१० छ
sudo apt-get oracle-java7-इंस्टॉलर स्थापना गर्नुहोस्
E: Oracle-java7-इंस्टॉलर प्याकेज स्थित गर्न सकिएन
उमर मान्रिक्वेजलाई जवाफ दिनुहोस्
उबुन्टु १.16.04.०XNUMX LTS Xenial Xerus सँग आधिकारिक रिलीज मिति छ
लकीब्याकअप, तपाईको जगेडा त्यस्तो सरल कहिल्यै भएको थिएन